AMBENANA MAFY NY HOPITALY : Zaza 40 naiditra hopitaly noho ny fihinanana ody kankana
Rakotra mpitandro filaminana ny hopitaly be ao Toliara. Mampiaka-peo ireo ray aman-drenin’ireo mpianatra 40 avy ao amin’ny EPP Anketa sy Andaboly, izay manana zanaka marary noho ny fihinanana fanafody kankana nozarain’ny minisiteran’ny Fahasalamana. 14 juin 2017
Nilaza izy ireo fa fanapoizinana no natao ireo mpianatra madinika ireo.
Nisy fizaràna fanafody kankana nokarakarain’ny minisiteran’ ny Fahasalamana ho an’ireo mpianatra ambaratonga voalohany ho an’ny sekolim-panjakana ao anatin’ny Distrikan’i Toliara voalohany. Nanomboka ny alatsinainy teo dia mitaraina fa marary kibo sy mandoa taorian’ny nihinana io fanafody kankana io ireo izay nahazo ity fanafody ity. Misy aza ny milaza fa torana ny sasany tamin’ireo zaza, araka ny vaovao voaray avy any an-toerana.
Voatery nampidirina ao amin’ny Hopitaly Be ao an-tampon-tanànan’i Toliara ireo zaza miisa 40 ireo, noho izany.
Araka ny fitantaran’ ireo ray aman-dreny sasany dia ny alatsinainy no nitaraina marary ireo zanany. Nieritreritra izy ireo fa mandalo ihany izany, kinanjo ny talata maraina nitombo isa ihany ireo zaza mandoa sy fanina tao an-tsekoly. Teo vao nahafantarana fa vokatr’ilay fanafody kankana no niteraka ny aretin’ireo zaza ireo. Raikitra amin’izay ny savorovoro, ka tezitra ireto farany ary nikasa haka an-keriny ireo mpampianatra ao anatin’ ireo EPP roa ireto. Vaky nandositra avokoa ireo mpampianatra ao amin’ny EPP Anketa omaly maraina, raha ny vaovao voaray avy any an-toerana ihany.
Nilaza ireto ray aman-dreny niharan-doza fa fanapoizinana no natao an’ireo zanany satria ny fampihinanana fanafody kankana ny zaza dia avy misakafo sy alohan’ny hatory alina. Mangataka fanazavana avy amin’ny tompon’ andraikitry ny Cisco izy ireo, omaly, momba io raharaha io. Tsy ny avy ao amin’ny Cisco izay notakian’ ireo no nanao fanambarana fa ny Talem-paritrin’ny Fahasalamana ao Toliara no nanao izany. Nanambara ity farany fa « hanao fanadihadiana momba io raharaha io any amin’ny minisitera any Antananarivo izahay fa tsy nanaiky fa fahadisoana no niteraka izao tsy fahasalaman’ny zaza efapolo tafiditra Hopitaly izao ». Tsy nahafapo ireto ray aman-dreny nefa ny fanambaràna izany, ka nivadika korontana izany ankehitriny, araka ny vaovao voaray ihany. Ambenan’ny mpitandro filaminana mafy, araka izany, ny Hopitaly be omaly, satria tsy manaiky hatramin’ny farany ireo ray aman-dreny. Andrasana ny ho tohin’ny raharaha.